ကိုဗစ်ဘေးထက် ရေရှားတဲ့ဘေးကပိုဆိုးနေတဲ့ မွန်ပြည်နယ် - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကိုဗစ်ဘေးထက် ရေရှားတဲ့ဘေးကပိုဆိုးနေတဲ့ မွန်ပြည်နယ်
မွန်ပြည်နယ်ဟာ ရာဘာအဓိက စိုက်ပျိုးတဲ့ ပြည်နယ်ဖြစ်
မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့နယ် အတော်များများဟာ ဒီနှစ်နွေမှာလည်း ရေရှားပါးတဲ့ ဒဏ်ကို ထပ်ပြီးခံစားနေရပြန်ပါပြီ။
ဒီနှစ် ၂၀၂၀ မေလ ပထမအပတ်က စတင်လို့ ရေရှားပါးမှု အခြေအနေတွေ ပိုဆိုးလာပြီး၊ ဒီလို ရေရှားတဲ့ ဒဏ်ကို ခံစားနေရတာ ခုဆိုရင် ငါးနှစ်ဆက်တိုက်ရှိပြီလို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
ရေရှားတဲ့ဒဏ်ကို စခံစားနေရတဲ့ မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်မှာတော့ မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် အစီအစဉ်နဲ့ ကမ္ဘောဇ ဘဏ်က လှူထားတဲ့ ဂါလံ ၃၂၀၀ဆန့် ရေကားနဲ့ ရေဂါလံ တစ်သောင်းလောက်ကို အောင်မင်္ဂလာ ၊ အောင်သာယာ၊ ကျုံကဒါတ်၊ ဟံသာဝတီ ဘကကျောင်း ၊ ဟံသာဝတီ ရပ်ကွက်၊ ကွမ်သတ် ကျေးရွာတွေကို မေလ ၁၀ ရက်နေ့က ရေတွေလိုက် ပေးဝေနေတာဖြစ်တယ်လို့ သံဖြူဇရပ်စည်ပင်ဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်း ကိုထွန်းမြင့်ကျော်က ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ အနေအထားမှာမွန် ပြည်နယ် က မြို့နယ် ၁၀ မြို့နယ်မှာ မြို့နယ် ကိုးခုလောက် က ဒီရေရှားတဲ့ဒဏ်ကို ခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးတော့ ရေရရှိနေတဲ့ အဝီစိတွင်းတွေမှာလည်း ရေခန်းခြောက်ကုန်တာ ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ လိုက်လံကူညီနေသူတွေက ဆိုပါတယ်။
တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ရေလိုက်လံဖြန့်ဝေပေးနေပေမယ့် ရေအလှူရှင်ရောက်ပေမယ့် တစ်ချို့နေရာတွေမရောက်
သံဖြူဇရပ်ရေပေးဝေရေးကော်မတီကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ကိုထွန်းမြင့်ကျော်က" ရေရှားလာတာ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်၊ ဒီနှစ်ကတော့စံချိန်အချိုးဆုံးပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါနဲ့ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေ အလျဉ်မမီ အောင်ကို တမြို့နယ်လုံးမှာ ရေရှားတယ်၊ အချိန်လည်း အကြာဆုံးပဲ၊ ရေရှားတဲ့ ဧရိယာလည်း ကျယ်လာတယ်" လို့ လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ်မှာ ရေရှားနေတဲ့ ပြဿနာကို သူက ပြောပြပါတယ်။
ရေးတစ်မြို့နယ်ပဲ ရေးချောင်းရှိတာကြောင့်ရေရှားပါးမှု ဒဏ်က သက်သာတယ်လို့ ကိုထွန်းမြင့်ကျော်က ဆိုပါတယ်။
မော်လမြိုင်ရပ်ကွက်တော်တော်များများမှာလည်း ညသန်းခေါင်ထိ လိုက်ပြီးရေပေးဝေနေပေမယ့် ရေလုံလောက်တာတွေ မရှိသေးဘူးလို့ မော်လမြိုင်ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
မော်လမြိုင်ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုနေမင်းက " ရပ်ကွက်တော်တော်များများမှာကို ရေက နည်းနေတာ ။ တချို့ရပ်ကွက်တွေဆို မြို့လယ်ကောင် ဖြစ်ပေမယ့်မရတဲ့နေရာမရဘူး " လို့ဆိုပါတယ်။
မြို့တော် မော်လမြိုင်မှာ ရေကို ချွေတာ သုံးစွဲကြဖို့ အသိပေးထုတ်ပြန်ထား
မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကို ရေအဓိက ပေးဝေနေတဲ့ ရွှေနတ်တောင်ဆည်နဲ့ ကင်ပွန်းခြုံဆည် တို့မှာ လည်းရေခန်းခြောက်လာပြီး မိုးမကျမီ ရေသုံးစွဲနိုင်ဖို့ အတွက် ရေကို ချွေတာ သုံးစွဲကြဖို့ မော်လမြိုင် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့က မေလ ၇ ရက်နေ့က အသိပေး ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ရေလိုက်လံဖြန့်ဝေပေးနေပေမယ့် ရေအလှူရှင် မရောက်တဲ့အတွက် ဒေသခံတွေ က ရေတစ်စည် ကို ငွေ ၈၀၀ နဲ့ ၁၀၀၀ ကြားပေးဝယ်သုံးနေရတဲ့ အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
ရေအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းဖို့ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရက နှစ်စဉ် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီ ဖြေရှင်းနေပေမယ့် ရေရှားပါးမှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အခက်အခဲတွေရှိနေတုန်းပဲဖြစ်တယ်လို့ ကိုထွန်းမြင့်ကျော်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးက " အကြောင်းအရာတွေကတော့ အများကြီးရှိမယ်။ ပထမ အပြောင်းအလဲကတော့ ရာသီဥတုကတစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်ပြောင်းလဲလာတယ် အပူချိန်တွေမြင့်လာတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကျနော်တို့ဆီမှာရာဘာက အဓိကစိုက်ပျိုးတဲ့ သစ်ပင်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ လူတွေကစီးပွားရေးအရထွက်ကုန် တစ်ခုအနေနဲ့ စိုက်တော့ တခြားသဘာဝ အလျောက်ပေါက်တဲ့တောတွေမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရေထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ သဘာဝတောတွေမရှိတာ ရေခန်းခြောက်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ် " လို့ဆိုပါတယ်.
မွန်ပြည်နယ်ဟာ ရာဘာအဓိက စိုက်ပျိုးတဲ့ ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး၊နောက်အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ ကျောက်မိုင်းတွေ ခွဲထုတ်နေတာကို ခွင့်ပြုတာများပြီး အဆမတန်ထုတ်လိုက်တာကြောင့် တချို့စိမ့်စမ်းရည်တွေဟာခန်းခြောက်လာတာတွေဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာ အောင်နိုင်ဦးက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ အပူချိန်ဟာ အရင်ထက် ပိုပြီး ဒီဂရီပြောင်းလဲလာတာတွေရှိပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကတည်းက အပူချိန် ၄၀ ကျော် စင်တီ ဂရိတ်အထိ ရှိလာတာဟာ ပြောင်းလဲလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါက်တာ အောင်နိုင်ဦးက " မြို့နယ်အားဖြင့် ပြောရင်တော့မြို့နယ်တိုင်းလိုလို အနည်းနဲ့အများ ရှားနေတယ်။ပေါင်ဘက်ခြမ်းကကျောက်မိုင်းထုတ်တဲ့ ရွာတော်တော်များ ရေရှားပါးမှုခံနေရတယ်။ ပေါင်ရဲ့အစွန်အဖျား ပင်လယ်ကမ်းစပ်နားက ရွာတွေ၊ သထုံမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေ၊ မုဒုံ နဲ့သံဖြူဇရပ်မှာလည်း အတော်ရှားနေတယ်ဗျ " လို့ပြောပါတယ်။
" အခု သုံးလေးနှစ်အတွင်း ရေရှားတာဟာပိုဆိုးလာတယ် ။ တောင်ခြေကရွာတွေတောင်ခန်းခြောက်လာတယ်။ သုံးလေးနှစ်အတွင်းပြောင်းလဲလာတာဆိုတော့ နိုင်ငံဘက်ကတော့ ရေအရင်းအမြစ်စုဆောင်းတာတွေ ရေကန်တွေ တူးတာတွေလုပ်နေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တဖက်က ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်နေတယ် ဒါပေမယ့် တဖက်ကတော့ ရေရှားပါးမှုပြဿနာကြီးတော့ မရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့ "လည်းကိုထွန်းမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်။
" အဝီစိတွင်းတွေတူးတာ။ တူးပြီးသား အဟောင်းတွေကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးတာ။ မြို့ပေါ်မှာဆို ရေရနိုင်တဲ့နေရာကနေ သွယ်တန်းပေးတာ။ အတ္တရံမြစ်ကနေ ရေကိုသန့်စင် ပေးတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မလုံလောက်သေးပါဘူး " လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။
" ရေရှည်ရေတို ကျနော်တို့ နှစ်ခုစလုံးစဉ်းစားရပါမယ်။ ရေတိုကုစားတာကတော့ရေလှူတာ။ ရေရှည်ကတော့ သဘာဝရာသီဥတုကို ပြန်ပြုပြင်တာဖြစ်တဲ့ မလိုအပ်ဘဲ သစ်တောတွေကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းတာတွေ ရပ်သင့်ပါတယ် ။ မလိုအပ်ဘဲကျောက်ထုတ်တာတွေလည်းပါတယ်။နောက် သဘာဝဂေဟစနစ်ကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့အချက်တွေကို ထိန်းသိမ်းထိန်းချုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ရှိပြီးသား ဆည်တွေတာတမံတွေကိုလည်းပြန်လည်တူးဖော်တာတွေလုပ်သင့်တယ်" လို့လည်း ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးက ပြောပါတယ်။
ကိုဗဈဘေးထကျ ရရှေားတဲ့ဘေးကပိုဆိုးနတေဲ့ မှနျပွညျနယျ
မှနျပွညျနယျရဲ့ မွို့နယျ အတျောမြားမြားဟာ ဒီနှဈနှမှောလညျး ရရှေားပါးတဲ့ ဒဏျကို ထပျပွီးခံစားနရေပွနျပါပွီ။
ဒီနှဈ ၂၀၂၀ မလေ ပထမအပတျက စတငျလို့ ရရှေားပါးမှု အခွအေနတှေေ ပိုဆိုးလာပွီး၊ ဒီလို ရရှေားတဲ့ ဒဏျကို ခံစားနရေတာ ခုဆိုရငျ ငါးနှဈဆကျတိုကျရှိပွီလို့ ဒသေခံတှကေ ဆိုပါတယျ။
ရရှေားတဲ့ဒဏျကို စခံစားနရေတဲ့ မှနျပွညျနယျ သံဖွူဇရပျမွို့နယျမှာတော့ မှနျပွညျနယျ လှတျတျော အစီအစဉျနဲ့ ကမ်ဘောဇ ဘဏျက လှူထားတဲ့ ဂါလံ ၃၂၀၀ဆနျ့ ရကေားနဲ့ ရဂေါလံ တဈသောငျးလောကျကို အောငျမင်ျဂလာ ၊ အောငျသာယာ၊ ကြုံကဒါတျ၊ ဟံသာဝတီ ဘကကြောငျး ၊ ဟံသာဝတီ ရပျကှကျ၊ ကှမျသတျ ကြေးရှာတှကေို မလေ ၁၀ ရကျနကေ့ ရတှေလေိုကျ ပေးဝနေတောဖွဈတယျလို့ သံဖွူဇရပျစညျပငျဥက်ကဋ်ဌ ဟောငျး ကိုထှနျးမွငျ့ကြျောက ပွောပါတယျ။
လကျရှိ အနအေထားမှာမှနျ ပွညျနယျ က မွို့နယျ ၁၀ မွို့နယျမှာ မွို့နယျ ကိုးခုလောကျ က ဒီရရှေားတဲ့ဒဏျကို ခံစားနရေတာဖွဈပွီးတော့ ရရေရှိနတေဲ့ အဝီစိတှငျးတှမှောလညျး ရခေနျးခွောကျကုနျတာ ကွောငျ့ ဖွဈတယျလို့ လိုကျလံကူညီနသေူတှကေ ဆိုပါတယျ။
သံဖွူဇရပျရပေေးဝရေေးကျောမတီကို တညျထောငျခဲ့သူ ကိုထှနျးမွငျ့ကြျောက" ရရှေားလာတာ တဈနှဈပွီးတဈနှဈ၊ ဒီနှဈကတော့စံခြိနျအခြိုးဆုံးပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရပျကူပါ လူဝိုငျးပါနဲ့ အရပျဖကျ အဖှဲ့အစညျးတှေ အလဉျြမမီ အောငျကို တမွို့နယျလုံးမှာ ရရှေားတယျ၊ အခြိနျလညျး အကွာဆုံးပဲ၊ ရရှေားတဲ့ ဧရိယာလညျး ကယျြလာတယျ" လို့ လကျရှိ မှနျပွညျနယျမှာ ရရှေားနတေဲ့ ပွဿနာကို သူက ပွောပွပါတယျ။
ရေးတဈမွို့နယျပဲ ရေးခြောငျးရှိတာကွောငျ့ရရှေားပါးမှု ဒဏျက သကျသာတယျလို့ ကိုထှနျးမွငျ့ကြျောက ဆိုပါတယျ။
မျောလမွိုငျရပျကှကျတျောတျောမြားမြားမှာလညျး ညသနျးခေါငျထိ လိုကျပွီးရပေေးဝနေပေမေယျ့ ရလေုံလောကျတာတှေ မရှိသေးဘူးလို့ မျောလမွိုငျဒသေခံ တဈဦးက ပွောပါတယျ။
မျောလမွိုငျဒသေခံတဈဦးဖွဈတဲ့ ကိုနမေငျးက " ရပျကှကျတျောတျောမြားမြားမှာကို ရကေ နညျးနတော ။ တခြို့ရပျကှကျတှဆေို မွို့လယျကောငျ ဖွဈပမေယျ့မရတဲ့နရောမရဘူး " လို့ဆိုပါတယျ။
မျောလမွိုငျမွို့ပျေါကို ရအေဓိက ပေးဝနေတေဲ့ ရှနေတျတောငျဆညျနဲ့ ကငျပှနျးခွုံဆညျ တို့မှာ လညျးရခေနျးခွောကျလာပွီး မိုးမကမြီ ရသေုံးစှဲနိုငျဖို့ အတှကျ ရကေို ခြှတော သုံးစှဲကွဖို့ မျောလမွိုငျ စညျပငျသာယာရေး အဖှဲ့က မလေ ၇ ရကျနကေ့ အသိပေး ထုတျပွနျထားတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။
တဈခြို့နရောတှမှော ရလေိုကျလံဖွနျ့ဝပေေးနပေမေယျ့ ရအေလှူရှငျ မရောကျတဲ့အတှကျ ဒသေခံတှေ က ရတေဈစညျ ကို ငှေ ၈၀၀ နဲ့ ၁၀၀၀ ကွားပေးဝယျသုံးနရေတဲ့ အခွအေနတှေလေညျးရှိတယျလို့ ဒသေခံတှကေ ဆိုပါတယျ။
ရအေခကျအခဲကို ဖွရှေငျးဖို့ မှနျပွညျနယျ အစိုးရက နှဈစဉျ ငှကေပျြသိနျးပေါငျးထောငျနဲ့ခြီ ဖွရှေငျးနပေမေယျ့ ရရှေားပါးမှု ပွဿနာကို ဖွရှေငျးဖို့ အခကျအခဲတှရှေိနတေုနျးပဲဖွဈတယျလို့ ကိုထှနျးမွငျ့ကြျောက ပွောခဲ့ပါတယျ။
မှနျပွညျနယျ လှတျတျော ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာအောငျနိုငျဦးက " အကွောငျးအရာတှကေတော့ အမြားကွီးရှိမယျ။ ပထမ အပွောငျးအလဲကတော့ ရာသီဥတုကတဈနှဈထကျ တဈနှဈပွောငျးလဲလာတယျ အပူခြိနျတှမွေငျ့လာတယျ။ နောကျတဈခကျြက ကနြျောတို့ဆီမှာရာဘာက အဓိကစိုကျပြိုးတဲ့ သဈပငျတှေ ဖွဈနတေယျ။ လူတှကေစီးပှားရေးအရထှကျကုနျ တဈခုအနနေဲ့ စိုကျတော့ တခွားသဘာဝ အလြောကျပေါကျတဲ့တောတှမေရှိတော့ဘူး။ဒါကွောငျ့ရထေိနျးသိမျးနိုငျတဲ့ သဘာဝတောတှမေရှိတာ ရခေနျးခွောကျနိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုလို့ကြှနျတျောတို့ကမွငျတယျ " လို့ဆိုပါတယျ.
မှနျပွညျနယျဟာ ရာဘာအဓိက စိုကျပြိုးတဲ့ ပွညျနယျဖွဈပွီး၊နောကျအကွောငျးအရာဖွဈတဲ့ ကြောကျမိုငျးတှေ ခှဲထုတျနတောကို ခှငျ့ပွုတာမြားပွီး အဆမတနျထုတျလိုကျတာကွောငျ့ တခြို့စိမျ့စမျးရညျတှဟောခနျးခွောကျလာတာတှဖွေဈတယျလို့ ဒေါကျတာ အောငျနိုငျဦးက ပွောပါတယျ။
လကျရှိ မှနျပွညျနယျရဲ့ အပူခြိနျဟာ အရငျထကျ ပိုပွီး ဒီဂရီပွောငျးလဲလာတာတှရှေိပွီး လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျနှဈကတညျးက အပူခြိနျ ၄၀ ကြျော စငျတီ ဂရိတျအထိ ရှိလာတာဟာ ပွောငျးလဲလာတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒေါကျတာ အောငျနိုငျဦးက " မွို့နယျအားဖွငျ့ ပွောရငျတော့မွို့နယျတိုငျးလိုလို အနညျးနဲ့အမြား ရှားနတေယျ။ပေါငျဘကျခွမျးကကြောကျမိုငျးထုတျတဲ့ ရှာတျောတျောမြား ရရှေားပါးမှုခံနရေတယျ။ ပေါငျရဲ့အစှနျအဖြား ပငျလယျကမျးစပျနားက ရှာတှေ၊ သထုံမွို့ပျေါရပျကှကျတှေ၊ မုဒုံ နဲ့သံဖွူဇရပျမှာလညျး အတျောရှားနတေယျဗြ " လို့ပွောပါတယျ။
" အခု သုံးလေးနှဈအတှငျး ရရှေားတာဟာပိုဆိုးလာတယျ ။ တောငျခွကေရှာတှတေောငျခနျးခွောကျလာတယျ။ သုံးလေးနှဈအတှငျးပွောငျးလဲလာတာဆိုတော့ နိုငျငံဘကျကတော့ ရအေရငျးအမွဈစုဆောငျးတာတှေ ရကေနျတှေ တူးတာတှလေုပျနပေါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ တဖကျက ပံ့ပိုးမှုတှလေုပျနတေယျ ဒါပမေယျ့ တဖကျကတော့ ရရှေားပါးမှုပွဿနာကွီးတော့ မရှငျးနိုငျသေးဘူးလို့ "လညျးကိုထှနျးမွငျ့ကြျောကပွောပါတယျ။
" အဝီစိတှငျးတှတေူးတာ။ တူးပွီးသား အဟောငျးတှကေိုပွနျပွငျဆငျပေးတာ။ မွို့ပျေါမှာဆို ရရေနိုငျတဲ့နရောကနေ သှယျတနျးပေးတာ။ အတ်တရံမွဈကနေ ရကေိုသနျ့စငျ ပေးတာတှရှေိတယျ။ ဒါပမေယျ့ မလုံလောကျသေးပါဘူး " လို့လညျးသူကပွောပါတယျ။
" ရရှေညျရတေို ကနြျောတို့ နှဈခုစလုံးစဉျးစားရပါမယျ။ ရတေိုကုစားတာကတော့ရလှေူတာ။ ရရှေညျကတော့ သဘာဝရာသီဥတုကို ပွနျပွုပွငျတာဖွဈတဲ့ မလိုအပျဘဲ သဈတောတှကေို ခုတျထှငျရှငျးလငျးတာတှေ ရပျသငျ့ပါတယျ ။ မလိုအပျဘဲကြောကျထုတျတာတှလေညျးပါတယျ။နောကျ သဘာဝဂဟေစနဈကိုပကျြစီးအောငျလုပျတဲ့အခကျြတှကေို ထိနျးသိမျးထိနျးခြုပျဖို့လိုပါတယျ။ရှိပွီးသား ဆညျတှတောတမံတှကေိုလညျးပွနျလညျတူးဖျောတာတှလေုပျသငျ့တယျ" လို့လညျး ဒေါကျတာအောငျနိုငျဦးက ပွောပါတယျ။